लाईफ को पहिलो …. साथी को दाई सँग सारै मज्जा आयो::आर एम खबर
लाईफ को पहिलो …. साथी को दाई सँग सारै मज्जा आयो
- | आर.एम. सम्बाददाता
गर्मिले होला भेस्ट खोल्नु भाको थियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरेई भएछु, बडी एक्दम सेक्सी थियो। कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ। मैले आघि नै भने, अनि दाई नुहाउन लाई बाहिर कल म जानुभो। म झ्याल बाट हेरी रहेँ दाई नुहाएको, मलाई गएर दाईको शरीर रगड्न मन थियो तर के गर्ने मिलेन त्यसो गर्न, तेइ भएर हेरेरै चित्त बुझाएँ। दाई नुहाई सकेर भित्र आउनु भो अनि के हेरेको फुच्ची ! त्यसरी अरु नुहाको हेर्नु हुँदैन भन्नु भो। म त लाजले भुतुक्कै भएँ, अब के भन्ने भनेर। अनि म पनि के कम्, अरु
नुहाको कस्ले हेरेको छ र ? तपाईं नुहाको पो हेरेको त ! दाईले टावेल मात्र बेर्नु भाको थियो अनि बडी भरि पानी को थोपा हरु, हेर्दै सेक्सी एन्ड हट देखिनु भाको थियो। त्यस्तो हेर्न मन भए रूममा आउ भन्नु भएर दाई रूम म जानु भो, मलाई के भो लाज नै हरायो र म पनि दाई को रूम मा गएँ। दाई छक्क पर्नु भो, जिस्केको पो त फुच्ची, तँ साच्ची आको भन्नु भो। म के भनुम भनुम भो अनि ढाटुवा ! भनेछु। त्यसपछि दाइले लु हेर फुच्ची भन्नु भो-अबुई! कत्रो रैछ दाइको त, रातो-रातो, लामो र मोटो। म त देखेर सीक भएछु।
त्यस्तै ३० मिनेट पछि लाडो निकालेर कपाल समातेर मेरो मुखमा लाडो छिराउनु भो। म त फेरी चुसाउनु आट्नु भएछ भनेको थिएँ। एकछिन् सम्म लिंग मेरो मुख मा राख्नु भो। मलाई सास फेर्न नि अफ्ठेरो भैरा थियो, एकछिन् मा त तातो भो मुख। दाईले मेरो नाक नि बन्द गरिदिनु भो। नाक बन्द भएपछि त त्यो तातो पानी सब निलेछु। अनि मात्र मुख बाट
लिंग झिक्नु भो, अनि हाँस्दै कस्तो रैछ टेस्ट भन्नु भो। मलाई त डर लाग्यो अब के हुन्छ होला भनेर। अनि दाई ले हग गर्दै केहि हुँदैन फुच्ची भन्नु भो। हामी एक्-अर्काको चुस्दै खेलाउँदै निदाए छौँ। बिहानको ३ बजे मात्र बीउँझिएँ अनि मेरो लुगा बोकेर के निस्किनु लागेको फेरी दाईले समातेर राती झैं गर्न थाल्नु भो अनि फेरी मुखमा झारेर दाई सुत्नु भो अनि म चाहिँ लुगा लगाएर साथी को रूममा आएर सुतेँ।
सुक चिच्यायो फेरि तलाइ लाज लागे बिहे गरेर मेरो मा ल्याइज न त म दन्काउला? हा हा सुक ले यस्तो बोलेछी कुमार रन्कियो कस्तो मुजि यार त अर्काको बुढी चिक्छु भन्छस ।भनेपछी मैले चाइ बिहे गरेर दुरन फर्केछी मात्र चिक्छु होला त्यसबेला सम्म लाज पनि हराउला ल मेरो यहि कसम भो ।कुमार ले आफ्नो कुरा सक्कायो ।अब पालो निलम को ।